အတော်များများ ဂရုမစိုက်ပဲနေကြတဲ့ အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ ရှေ့ပြေး လက္ခဏာ(၁၀)ချက် – Suehninsi
အတော်များများ ဂရုမစိုက်ပဲနေကြတဲ့ အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ ရှေ့ပြေး လက္ခဏာ(၁၀)ချက်
Sue | September 3, 2020 | ရသစုံ | No Comments
ပင်လယ်စာတွေမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် တွေ့ရတဲ့ အိုင်အိုဒင်းဟာ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းက အသုံးပြုတဲ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဓါတ်သတ္တုဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်အိုဒင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့၊ ဆဲလ်ပျက်စီးခြင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့၊ ကြီးထွားမှုကို ထိန်းချုပ်စီမံပေးဖို့နှင့် ကျန်းမာသော ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ ကူညီခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သို့သော် သင့်မှာ အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့နေရင် သိနိုင်မလား? လူအများစုက လည်ပင်းကြီးနေတာတွေ့ရင် ဒါအိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့လို့ ဆိုတာလောက်ပဲ သိကြပါတယ်။ တခြားလက္ခဏာတွေကို သတိမထားမိကြပါဘူး။
အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့မှုက သက်သောင့်သက်သာမရှိသော အခြေအနေကနေ အနည်းငယ်ပြင်းထန်သော ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့မှုကို သတိထားမိနိုင်စေမယ့် အစောပိုင်းလက္ခဏာ (၁၀)ခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်နှင့် သင်ယူနိုင်စွမ်း လျော့နည်းခြင်း – လေ့လာမှုတွေအရ သိုင်းရွိုက်အဆင့်နိမ့်သော လူကြီးတွေဟာ မှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်မှုတွေမှာ စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ သုတေသနအရ စွမ်းဆောင်ရည် ကွာဟမှုတွေအတွက် အကြောင်းပြချက်က ဦးနှောက် ကြီးထွားဖို့အတွက် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနိမ့်တာက ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေနိမ့်တာက အသေးစား hippocampi ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်း – ကိုယ်အလေးချိန် ရုတ်တရက်တိုးတာက အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့မှု လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သုတေသနပြုချက်အရ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းဟာ သင့်ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုနှုန်းကို ထိန်းညှိရာမှာ အရေးပါပြီး လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်အဆင့်နိမ့်ခြင်းက ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုနှုန်းကို နှေးကွေးစေပြီး ကယ်လိုရီအနည်းငယ်သာ လောင်ကျွမ်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဆီတွေ တိုးလာပြီး ကိုယ်အလေးချိန်တတ်လာပါတယ်။
အသားအရေခြောက်လာပါတယ် – သုတေသနရလဒ်တွေအရ သိုင်းရွိုက်အဆင့်နိမ့်တဲ့လူနာ ၇၇ရာခိုင်နှုန်းဟာ အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းကို ခံစားရကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းကြောင့် ပိုမိုဆိုးရွားစေတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နှလုံးခုန်နှုန်း ပြောင်းလဲလာပါတယ် – သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းက သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအပါအဝင် များစွာသောအရာတွေအတွက် တာဝန်ယူရပါတယ်။ သုတေသနအရ အိုင်အိုဒင်းနိမ့်ကျတာ နှလုံးခုန်နှုန်းကို နှေးစေပြီး အိုင်အိုဒင်း လွန်ကျွံပြန်ရင်လည်း နှလုံးခုန်မြန်တာကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့မှု ခံစားရပါက နှလုံးခုန်နှုန်း နှေးကွေးလာပါတယ် သွေးပေါင်ကျလာပါတယ် အားနည်းပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းကို ခံစားရပါတယ် မူးဝေခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို မကြာခဏ ခံစားရပါတယ်
အာရုံစိုက်မှု လျော့ကျသွားပါတယ် – သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေက စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်တာကြောင့် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းပမာဏ နည်းသွားရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုတွေ နှေးကွေးသွားကြောင်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာရုံစူးစိုက်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ အရာက အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့မှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လည်ပင်းရောင်ရမ်းခြင်း – သိုင်းရွိုက်ဂလင်းက သေးငယ်ပြီး လည်ပင်းရဲ့ရှေ့မှာ လိပ်ပြာပုံသဏ္ဍန် အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် တည်ရှိပါတယ်။ အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့မှုကို ခံစားရတဲ့အခါ သင့်လည်ပင်းရှေ့မှာ ရောင်ရမ်းလာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သုတေသနအရ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အိုင်အိုဒင်းလိုအပ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အိုင်အိုဒင်းမရှိခြင်းက TSH (သိုင်းရွိုက်လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း)ကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ သိုင်းရွိုက်သည် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ သွေးအတွင်းရှိ TSH တွေအရ သင့်လျော်တဲ့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းပမာဏကို ဖန်တီးဖို့ သိုင်းရွိုက်က အလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းအလုပ်များတဲ့အခါ သိုင်းရွိုက်ရှိ ဆဲလ်တွေဟာ ကြီးထွားလာပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ကုသမှုမခံယူပါက သိုင်းရွိုက်ဂလင်းက အရမ်းကြီးလာပြီး လည်ပင်းကြီးရောဂါကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် အားနည်းခြင်း – အမြဲတမ်းပင်ပန်းပြီး အားနည်းနေသလို ခံစားနေရပါသလား? အကောင်းဘက်ကတွေးဖို့တောင် စွမ်းအင်အလုံအလောက်မရှိသလို ခံစားနေရပါသလား? အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့ခြင်းက ဒါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုများစွာက ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုက သိုင်းရွိုက်ပမာဏနိမ့်တဲ့သူတွေမှာ အဖြစ်များကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေက ကယ်လိုရီတွေကို အသုံးဝင်သော စွမ်းအင်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးတဲ့ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုနှုန်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတာကြောင့်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင့်မှာ အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့ခြင်းဖြင့် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းပမာဏ နိမ့်ကျပါက အောက်ပါလက္ခဏာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ စွမ်းအင်လိုသလောက် ထုတ်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ခြင်း စွမ်းအင်ပမာဏ ထိုးကျခြင်း အားနည်းမှုကို ခံစားရခြင်း ဒီလိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကြုံလာရင် အိုင်အိုဒင်းသုံးစွဲမှုကို တိုးသင့်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းမှာ အိုင်အိုဒင်းလုံလောက်မှ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ပြီး စွမ်းအင်တွေထပ်ပေးနိုင်မှာပါ။
ဓမ္မတာပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း(သို့) များခြင်း – လစဉ်ဓမ္မတာပုံမှန်မဟုတ်တာ၊ ဓမ္မတာသွေးများတာက အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့မှုရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိထားရပါမယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းက အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါနှင့် ၎င်းတို့နဲ့ ဆက်စပ်နေသော ဟော်မုန်းတွေကို ထိန်းညှိဖို့ တာဝန်ယူရပါတယ်။ သုတေသီတွေက သိုင်းရွိုက်အဆင့်နိမ့်သော လူနာအများစုက ကျန်းမာသော လူနာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဓမ္မတာစက်ဝန်း မမှန်တာကို ခံစားကြရပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းပမာဏနိမ့်ခြင်းက ရာသီစက်ဝန်းပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ခြင်းအတွက် အရေးကြီးသော ဟော်မုန်းအချက်ပြတွေကို ပြိုကွဲစေနိုင်ပါတယ်။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရ ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ သိုင်းရွိုက်အဆင့်နိမ့်သော လူနာတွေဟာ များသောအားဖြင့် ရာသီသွေးပုံမှန်ထက်များတာကို မကြာခဏ ကြုံရတယ်လို့ ပြသခဲ့ပါတယ်။
အအေးခံစားမှု တိုးလာပါတယ် – အအေးဓါတ် ခံစားရခြင်းက အိုငအိုဒင်းချို့တဲ့မှု လက္ခဏာတစ်ခုဆိုတာ မသေချာဘူးလို့ သင်ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ လေ့လာမှုအရ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနိမ့်ကျနေတဲ့ လူတွေမှာ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ အအေးဒဏ် နည်းနည်းပိုလာရင် မခံနိုင်ဘူးလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းက လူရဲ့ဇီဝကမ္မနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ဖို့ တာဝန်ယူရပါတဘ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနိမ့်ခြင်းက များသောအားဖြင့် ဇီဝကမ္မနှုန်းကို နှေးကွေးစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပူထုတ်လုပ်မှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနိမ့်ခြင်းက များသောအားဖြင့် ဇီဝကမ္မနှုန်းကို နှေးကွေးစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပူထုတ်လုပ်မှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
ဆံပင်ကျွတ်ပါတယ် – ဆံပင်တွေကျွတ်တာက အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့မှု ခံစားနေရတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အိုင်အိုဒင်းဟာ အစားအစာကနေ ရရှိတဲ့ substance တစ်ခု ဖြစ်ပြီး thyroxine နဲ့ triiodothyronine လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းတွေက ဆံပင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအပါအဝင် အရာများစွာအတွက် တာဝန်ယူရပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ လူနာ ၃၀ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ် ခံစားရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပငျလယျစာတှမှော ပုံမှနျအားဖွငျ့ တှရေ့တဲ့ အိုငျအိုဒငျးဟာ သိုငျးရှိုကျဂလငျးက အသုံးပွုတဲ့ မရှိမဖွဈလိုအပျသော ဓါတျသတ်တုဖွဈပါတယျ။ အိုငျအိုဒငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျကို သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးတှေ ထုတျလုပျဖို့၊ ဆဲလျပကျြစီးခွငျးကို ပွနျလညျပွုပွငျဖို့၊ ကွီးထှားမှုကို ထိနျးခြုပျစီမံပေးဖို့နှငျ့ ကနျြးမာသော ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျကို မွှငျ့တငျပေးဖို့ ကူညီခွငျးဖွငျ့ အလုပျလုပျပါတယျ။ သို့သျော သငျ့မှာ အိုငျအိုဒငျးခြို့တဲ့နရေငျ သိနိုငျမလား? လူအမြားစုက လညျပငျးကွီးနတောတှရေ့ငျ ဒါအိုငျအိုဒငျးခြို့တဲ့လို့ ဆိုတာလောကျပဲ သိကွပါတယျ။ တခွားလက်ခဏာတှကေို သတိမထားမိကွပါဘူး။
အိုငျအိုဒငျးခြို့တဲ့မှုက သကျသောငျ့သကျသာမရှိသော အခွအေနကေနေ အနညျးငယျပွငျးထနျသော ရောဂါလက်ခဏာတှကေို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အိုငျအိုဒငျးခြို့တဲ့မှုကို သတိထားမိနိုငျစမေယျ့ အစောပိုငျးလက်ခဏာ (၁၀)ခုကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
မှတျဉာဏျနှငျ့ သငျယူနိုငျစှမျး လြော့နညျးခွငျး – လလေ့ာမှုတှအေရ သိုငျးရှိုကျအဆငျ့နိမျ့သော လူကွီးတှဟော မှတျဉာဏျစမျးသပျမှုတှမှော စှမျးဆောငျရညျ ညံ့ဖငျြးကွောငျး တှရေ့ပါတယျ။ သုတသေနအရ စှမျးဆောငျရညျ ကှာဟမှုတှအေတှကျ အကွောငျးပွခကျြက ဦးနှောကျ ကွီးထှားဖို့အတှကျ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးတှေ လိုအပျပါတယျ။ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးနိမျ့တာက ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးမှုကို ဆိုးကြိုးသကျရောကျနိုငျပါတယျ။ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးတှနေိမျ့တာက အသေးစား hippocampi ကိုဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
ရုတျတရကျ ကိုယျအလေးခြိနျတိုးခွငျး – ကိုယျအလေးခြိနျ ရုတျတရကျတိုးတာက အိုငျအိုဒငျးခြို့တဲ့မှု လက်ခဏာတဈခု ဖွဈနိုငျပါတယျ။ သုတသေနပွုခကျြအရ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးဟာ သငျ့ဇီဝဖွဈပကျြမှုနှုနျးကို ထိနျးညှိရာမှာ အရေးပါပွီး လိုအပျသော အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈကွောငျး ဖျောပွထားပါတယျ။ သိုငျးရှိုကျအဆငျ့နိမျ့ခွငျးက ဇီဝဖွဈပကျြမှုနှုနျးကို နှေးကှေးစပွေီး ကယျလိုရီအနညျးငယျသာ လောငျကြှမျးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အဆီတှေ တိုးလာပွီး ကိုယျအလေးခြိနျတတျလာပါတယျ။
အသားအရခွေောကျလာပါတယျ – သုတသေနရလဒျတှအေရ သိုငျးရှိုကျအဆငျ့နိမျ့တဲ့လူနာ ၇၇ရာခိုငျနှုနျးဟာ အသားအရခွေောကျသှခွေ့ငျးကို ခံစားရကွောငျးတှရှေိ့ရပါတယျ။ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးကွောငျ့ ပိုမိုဆိုးရှားစတေဲ့ အခွအေနမြေိုးမှာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
နှလုံးခုနျနှုနျး ပွောငျးလဲလာပါတယျ – သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးက သငျ့နှလုံးခုနျနှုနျးအပါအဝငျ မြားစှာသောအရာတှအေတှကျ တာဝနျယူရပါတယျ။ သုတသေနအရ အိုငျအိုဒငျးနိမျ့ကတြာ နှလုံးခုနျနှုနျးကို နှေးစပွေီး အိုငျအိုဒငျး လှနျကြှံပွနျရငျလညျး နှလုံးခုနျမွနျတာကို ဖွဈစပေါတယျ။ အိုငျအိုဒငျးခြို့တဲ့မှု ခံစားရပါက နှလုံးခုနျနှုနျး နှေးကှေးလာပါတယျ သှေးပေါငျကလြာပါတယျ အားနညျးပွီး ပငျပနျးနှမျးနယျခွငျးကို ခံစားရပါတယျ မူးဝခွေငျး၊ ခေါငျးကိုကျခွငျးကို မကွာခဏ ခံစားရပါတယျ
အာရုံစိုကျမှု လြော့ကသြှားပါတယျ – သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးတှကေ စှမျးအငျထုတျလုပျမှုအတှကျ လိုအပျတဲ့ အစိတျအပိုငျးမြားဖွဈတာကွောငျ့ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးပမာဏ နညျးသှားရငျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ လုပျဆောငျမှုတှေ နှေးကှေးသှားကွောငျး တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အာရုံစူးစိုကျမှုကို အဟနျ့အတားဖွဈစတေဲ့ အရာက အိုငျအိုဒငျးခြို့တဲ့မှု ဖွဈနိုငျပါတယျ။
လညျပငျးရောငျရမျးခွငျး – သိုငျးရှိုကျဂလငျးက သေးငယျပွီး လညျပငျးရဲ့ရှမှေ့ာ လိပျပွာပုံသဏ်ဍနျ အစိတျအပိုငျးအဖွဈ တညျရှိပါတယျ။ အိုငျအိုဒငျးခြို့တဲ့မှုကို ခံစားရတဲ့အခါ သငျ့လညျပငျးရှမှေ့ာ ရောငျရမျးလာတာကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ သုတသေနအရ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးတှေ ထုတျလုပျဖို့ သငျ့ခန်ဓာကိုယျဟာ အိုငျအိုဒငျးလိုအပျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျမှာ အိုငျအိုဒငျးမရှိခွငျးက TSH (သိုငျးရှိုကျလှုံ့ဆျောဟျောမုနျး)ကို တုံ့ပွနျတဲ့အနနေဲ့ သိုငျးရှိုကျသညျ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးတှကေို ဖနျတီးနိုငျစှမျးမရှိခွငျးကို ဆိုလိုပါတယျ။ သှေးအတှငျးရှိ TSH တှအေရ သငျ့လြျောတဲ့ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးပမာဏကို ဖနျတီးဖို့ သိုငျးရှိုကျက အလှနျအကြှံလုပျဆောငျရပါလိမျ့မယျ။ အရမျးအလုပျမြားတဲ့အခါ သိုငျးရှိုကျရှိ ဆဲလျတှဟော ကွီးထှားလာပွီး ရောငျရမျးခွငျးကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ ကုသမှုမခံယူပါက သိုငျးရှိုကျဂလငျးက အရမျးကွီးလာပွီး လညျပငျးကွီးရောဂါကို ဖွဈစပေါတယျ။
ပငျပနျးနှမျးနယျခွငျးနှငျ့ အားနညျးခွငျး – အမွဲတမျးပငျပနျးပွီး အားနညျးနသေလို ခံစားနရေပါသလား? အကောငျးဘကျကတှေးဖို့တောငျ စှမျးအငျအလုံအလောကျမရှိသလို ခံစားနရေပါသလား? အိုငျအိုဒငျးခြို့တဲ့ခွငျးက ဒါတှကေို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ လလေ့ာမှုမြားစှာက ပငျပနျးနှမျးနယျမှုက သိုငျးရှိုကျပမာဏနိမျ့တဲ့သူတှမှော အဖွဈမြားကွောငျး ဖျောပွထားပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးတှကေ ကယျလိုရီတှကေို အသုံးဝငျသော စှမျးအငျတှအေဖွဈ ပွောငျးလဲပေးတဲ့ ဇီဝဖွဈပကျြမှုနှုနျးနဲ့ ဆကျစပျနတောကွောငျ့ပါ။ ထို့ကွောငျ့ သငျ့မှာ အိုငျအိုဒငျးခြို့တဲ့ခွငျးဖွငျ့ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးပမာဏ နိမျ့ကပြါက အောကျပါလက်ခဏာတှကေို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျဟာ စှမျးအငျလိုသလောကျ ထုတျနိုငျစှမျး မရှိတော့ခွငျး စှမျးအငျပမာဏ ထိုးကခြွငျး အားနညျးမှုကို ခံစားရခွငျး ဒီလိုပငျပနျးနှမျးနယျမှုတှကွေုံလာရငျ အိုငျအိုဒငျးသုံးစှဲမှုကို တိုးသငျ့ပါတယျ။ သိုငျးရှိုကျဂလငျးမှာ အိုငျအိုဒငျးလုံလောကျမှ ပုံမှနျလညျပတျနိုငျပွီး စှမျးအငျတှထေပျပေးနိုငျမှာပါ။
ဓမ်မတာပုံမှနျမဟုတျခွငျး(သို့) မြားခွငျး – လစဉျဓမ်မတာပုံမှနျမဟုတျတာ၊ ဓမ်မတာသှေးမြားတာက အိုငျအိုဒငျးခြို့တဲ့မှုရဲ့ လက်ခဏာဖွဈနိုငျကွောငျး သိထားရပါမယျ။ ဘာ့ကွောငျ့လဲဆိုတော့ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးက အမြိုးသမီးလိငျအင်ျဂါနှငျ့ ၎င်းငျးတို့နဲ့ ဆကျစပျနသေော ဟျောမုနျးတှကေို ထိနျးညှိဖို့ တာဝနျယူရပါတယျ။ သုတသေီတှကေ သိုငျးရှိုကျအဆငျ့နိမျ့သော လူနာအမြားစုက ကနျြးမာသော လူနာတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ ဓမ်မတာစကျဝနျး မမှနျတာကို ခံစားကွရပါတယျ။ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးပမာဏနိမျ့ခွငျးက ရာသီစကျဝနျးပုံမှနျအတိုငျးဖွဈခွငျးအတှကျ အရေးကွီးသော ဟျောမုနျးအခကျြပွတှကေို ပွိုကှဲစနေိုငျပါတယျ။ အခွားလလေ့ာမှုတဈခုအရ ပွောငျးပွနျအနနေဲ့ သိုငျးရှိုကျအဆငျ့နိမျ့သော လူနာတှဟော မြားသောအားဖွငျ့ ရာသီသှေးပုံမှနျထကျမြားတာကို မကွာခဏ ကွုံရတယျလို့ ပွသခဲ့ပါတယျ။
အအေးခံစားမှု တိုးလာပါတယျ – အအေးဓါတျ ခံစားရခွငျးက အိုငအိုဒငျးခြို့တဲ့မှု လက်ခဏာတဈခုဆိုတာ မသခြောဘူးလို့ သငျထငျကောငျးထငျပါလိမျ့မယျ။ လလေ့ာမှုအရ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးနိမျ့ကနြတေဲ့ လူတှမှော ၈၀ရာခိုငျနှုနျးကြျောဟာ အအေးဒဏျ နညျးနညျးပိုလာရငျ မခံနိုငျဘူးလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးက လူရဲ့ဇီဝကမ်မနှုနျးကို ထိနျးခြုပျဖို့ တာဝနျယူရပါတဘျ။ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးနိမျ့ခွငျးက မြားသောအားဖွငျ့ ဇီဝကမ်မနှုနျးကို နှေးကှေးစပွေီး ခန်ဓာကိုယျအပူထုတျလုပျမှုကို လြော့နညျးစပေါတယျ။ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးနိမျ့ခွငျးက မြားသောအားဖွငျ့ ဇီဝကမ်မနှုနျးကို နှေးကှေးစပွေီး ခန်ဓာကိုယျအပူထုတျလုပျမှုကို လြော့နညျးစပေါတယျ။
ဆံပငျကြှတျပါတယျ – ဆံပငျတှကြှေတျတာက အိုငျအိုဒငျးခြို့တဲ့မှု ခံစားနရေတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အိုငျအိုဒငျးဟာ အစားအစာကနေ ရရှိတဲ့ substance တဈခု ဖွဈပွီး thyroxine နဲ့ triiodothyronine လို့ချေါတဲ့ ဟျောမုနျးမြားအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားပါတယျ။ ဒီဟျောမုနျးတှကေ ဆံပငျရဲ့ ကနျြးမာရေးအပါအဝငျ အရာမြားစှာအတှကျ တာဝနျယူရပါတယျ။ လလေ့ာမှုတဈခုအရ လူနာ ၃၀ရာခိုငျနှုနျးဟာ ဆံပငျကြှတျခွငျးကို အိုငျအိုဒငျးခြို့တဲ့ခွငျးရဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးအဖွဈ ခံစားရကွောငျး ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
Source : LifeStyleMyanmar
တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်တတ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးခဲ့တဲ့ မင်းညီ
မိန်းကလေးများ အထူးဖတ်သင့်တဲ့ အံမခန်းကောင်းလွန်းတဲ့ သံပုရာသီး အစွမ်း
လက်ရှိအွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မမ ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းရဲ့ မတော်လိုက်ရတဲ့ ရည်းစားအကြောင်း သေချာရှင်းပြခဲ့တဲ့ အိမ့်ချစ်
ဝါရင့်သမ္ဘာရင့် သရုပ်ဆောင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ခင်သန်းနု၊ ညွန့်ဝင်းတို့နဲ့ ပြန်တွေ့ဆုံတဲ့အခါ လူငယ်လေးတယောက်လိုပြန်ဖြစ်သွားပြီး ရိုကျိုးနေတဲ့ ကျော်သူ